I-35 EPHOLILEYO YEENWELE EZIJIJEKILEYO ZEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SEZITAYILE EZINGAMA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Iinwele ezingama-35 eziTyhidiweyo zeenwele zamadoda
Ukujija lolunye lweenwele ezilungileyo kumadoda amnyama. Abafana abaneenwele ezinde, eziphakathi kunye nezimfutshane banokusebenza ngokulula ngeendlela ezahlukeneyo zokujija ukwenza okupholileyo…
Ukujija lolunye lweenwele ezilungileyo kumadoda amnyama. Abafana abaneenwele ezinde, eziphakathi kunye nezifutshane banokusebenza ngokulula ngeendlela ezahlukeneyo zokujija ukwenza ukubukeka okupholileyo kunye nesitayile. Ngelixa iinwele ezijijekileyo zilondolozo olusezantsi kwaye kulula ukuzenza, iinwele ezijijekileyo zisesezangoku, zodidi kwaye zinokuguquguquka. Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zokujija kwabafana, ungabhangqa i-twist nge-fade, undercut, braids, top top, okanye mohawk ukufezekisa nasiphi na isitayile osifunayo. I-Edgy kunye neyaziwayo, ukujija kuye kwaba yinto ephambili yeenwele zamadoda. Ukuba ufuna iinwele ezintsha, jonga ezona ndlela zilungileyo zokujika iinwele zamadoda ukuze ufumane izimvo. Nokuba ukhetha ntoni okanye ubuntu bakho, zininzi izinto ezijijekileyo ezinamagama amadoda amnyama onokukhetha kuzo.
1Iinwele ezijijekileyo zaMadoda
1.3Iinwele ezimfutshane ezijijekileyo
1.4Iinwele eziPhakathi ziyajija
1.5Amabini eStrand Twists
1.8Ijija ngeTemp Fade
1.9UkuPhelela okuPhezulu okuPhezulu
1.10I-Faux Hawk Twists
1.12Ipateni engunxantathu Dreadlocks ngeTwists
1.13I-Taper Fade kunye ne-Sponge Twists
1.15Iblitshi eBlonde Ijija
1.16Gweba ngaphandle kwe-Undercut
1.17Iinwele ezijijekileyo zaMakhwenkwe
MbiniUngazijikisa njani iinwele emadodeni
Iinwele ezijijekileyo zaMadoda
Enye yezona zibini zithandwayo, i-twist kunye ne-fade yinguqulelo yanamhlanje kwisitayela sendalo. Elona candelo lililo malunga nokudibanisa nefade lizinwele ezimfutshane emacaleni zigxininisa iinwele ngaphezulu, zenza ukuba iinwele ezingaphezulu zibonakale.
Unokukhetha phakathi kokuphela okuphezulu, okuphantsi, okanye okuphakathi ngokuxhomekeke kukhetho lwakho. Le nguqulo ikwanobunewunewu ngokwaneleyo ukuba ijongeka intle ngeenwele ezinde okanye ezimfutshane kwaye ngokulula idibanisa ukusuka kubungcali ukuya ku-sexy kunye ne-chic.
Ukujija kukhupha ngaphandle komzamo kunye nokubonakala okungaqhelekanga. Kukugcina okuphantsi kakhulu kwaye kukuvumela ukuba ugcine kwiingcambu zakho. Le twist ivumela ii-curls zakho ukuba zenze ezona zinto zibalaseleyo kwaye zinika ivolumu yeenwele zakho.
Ukufumana i-hairstyle ejijekileyo, kuya kufuneka uqale ngokujija imicu emibini oshiye ubusuku kwaye uyirhoxise kusasa ukuze ikunike i-bounce kunye nevolumu.
Iinwele ezimfutshane ezijijekileyo
Akusoloko kufuneka uhambe ixesha elide ukwenza ingxelo, ukujija kweenwele ezimfutshane kunesibindi njengakude. Obu bude bunokufuna ukugcinwa okungaphezulu kuneenwele ezinde, kodwa kufanelekile ngumzamo. Ukufumana iinwele ezimfutshane zokujija kwamadoda, kuya kufuneka uqiniseke ukuba unenwele ezaneleyo ngaphezulu, ngokufanelekileyo i-intshi enye ukuya kwezi-2.
Ukuba uthatha isigqibo sokwenza iikhoyili ezixineneyo yazi ukuba azizukuchazwa ngokuthelekiswa neikhoyili ezikhululekileyo. Nangona kunjalo, zombini zisebenza kakuhle ngefade okanye nge-taper fade kunye nentshebe echetywe kakuhle.
iinwele zeenwele ezimfutshane
Iinwele eziPhakathi ziyajija
Iithwitsi ezinenwele eziphakathi zezona zikwi-quintessential kwaye ziqhelekile kulo mkhwa. Iinwele eziphakathi kwamadoda zivumela iikhoyili ukuba zenze ingxelo. Kuba iinwele zinde, ubunzima bezinwele budala ivolumu kwaye buvumela iinwele ziwe zijikeleze ubuso ngendlela efanayo yokwenza ii-braids. Unokwahlula okanye ukwahlula iinwele ukubonisa ulusu ukongeza okhethekileyo kulo.
Amabini eStrand Twists
Iintsontelo ezimbini zemisonto ziyafana uloyiko kodwa nikela ngenwele ekhethekileyo yefashoni yamadoda amnyama. Yaziwa ngokukhangeleka kwayo ngokulula kobudoda, ezi zintambo zimbini zingadityaniswa kunye nokuphela okanye ukusika emacaleni, okanye abafana banokuluka yonke intloko. Kwangokunjalo, ezi zinto zijijekileyo ziguquka kangangokuba zisebenzele amadoda aneenwele ezimfutshane nezinde.
isimbo sokucheba iinwele zendoda
Xa uzama oku ekhaya, qala ngokuthatha iinwele ezimbini kwicandelo kwaye uzidibanise kunye. Qhubeka nokwenza oku kunye nezinye iinwele zakho de ugqibe yonke intloko. Amanye amadoda agqiba kwelokuba ongeze kwinkangeleko ngokubeka izihombiso ezinje ngamaso eziphelweni zemisonto.
Ukuba ufuna isiphumo esifanayo ne dreadlocks kodwa andifuni ukubeka ixesha, ukujija kweenwele ezinde yinto enkulu ebambeleyo. Ezi coils zithatha ixesha elide kunelifutshane kodwa zingaphantsi kokuzibophelela kwexesha emva koko zibekiwe. Nangona kunjalo, bafuna ukugcinwa okungakumbi. Xa ujongene nale nto kuya kufuneka ukhulule zonke iiveki ezimbalwa ukugcina impilo yeenwele. Inkangeleko ngokubanzi yale nwele imalunga nolonwabo kunye nefashoni.
Iibhothi zokujija luhlobo olulodwa lweenwele ezolukiweyo zamadoda. Izitayile ze-Braid twist zihlala zinamacala amafutshane nge-fade okanye i-undercut haircut, kodwa abafana banokwenza ukuba zonke iintloko zabo ziboshwe. Zama ngeebhokisi zebhokisi okanye iikona ukufezekisa ukuphazamiseka kwamadoda okupholileyo. Ilula isitayile, iinwele eziphothiweyo zifuna ukhathalelo lweenwele kodwa zenza isitayile silula.
Ijija ngeTemp Fade
I-twist ene-temp fade yi-hairstyle ehamba phambili yamadoda amnyama. Isibini siphela ngababini kakuhle ngobude beenwele kunye nesitayile. Elona candelo lililo lokuphela komsindo kukuphela okuqala etempileni kugxininisa iinwele kwaye kutsalele iliso entlokweni. Olu hlobo lukwanceda ukuphakamisa ubuso kwaye luyamangalisa kwaye lumnandi.
UkuPhelela okuPhezulu okuPhezulu
Ukuphakama okuphezulu okuphelileyo kukuthatha okwangoku kwisitayile seklasikhi. Ngokungafaniyo netafile ephezulu, ukuphakama okuphezulu kwongeza i-funk ngokuqhushumba iinwele kunye nokwenza isitayile kumacala ahlukeneyo.
Ukugqibelela kwamadoda amnyama aneenwele ezinde ezishinyeneyo, le nwele ijongeka intle ngokufiphala emacaleni nasemva, zilungelelanise umgca weenwele, neendevu.
I-Faux Hawk Twists
Amadoda amnyama afuna i-mohawk ene-twist kodwa afuna into engacacanga kwaye eguquguqukayo ngakumbi, i-faux hawk twist inokuba kukujonga kakuhle. Njenge-mohawk yesiko, le ndlela igcina iinwele emacaleni zifutshane kunye nefade okanye i-undercut, ngelixa iinwele ngaphezulu zinde. I-faux hawk ivumela ukhetho olungenamda kwaye inokutyhalelwa phambili ukugquma inxenye yebunzi lakho. Naluphi na uhlobo olukhethileyo, uya kuza ujonge ukuthandana kunye nesitayile.
Ngokungafaniyo nezinye iinwele ezikolu luhlu, i-twist ethe tyaba ayikokufikelela kumthamo. Ifana kakhulu ne-cornrows, ukujija okuthe tyaba emadodeni kuyilelwe ukuba kube yinto eqheleke ngakumbi kunye nolondolozo olusezantsi kunye neekhoyili eziboshwe entloko. Oku akuthethi ukuba ungabeka i-oomph kwinkangeleko. Esi sitayile sinokubhangiswa nopheliso lokujonga okutsha, okurhabaxa.
Ipateni engunxantathu Dreadlocks ngeTwists
Unxantathu ojijekileyo unokuba yeyona ndlela ilungileyo kwibhokisi yemveli kwibhokisi yabo bafuna ukuhlaziya ukubonakala kwesiko.
iinwele zabafana abanamabunzi amakhulu
Le nguqulo ihlaziyiweyo ifezekiswa ngendlela efanayo nebhokisi yokuluka. Amacandelo akho e-stylist asusa iinwele zibe ngamacandelo angunxantathu ngaphambi kokuba ucoce iinwele usebenzisa iindlela ezimbini zokujija.
I-Taper Fade kunye ne-Sponge Twists
Kumadoda ane curls ezijiyileyo, i-taper fade eneziponji ezijijekileyo kunokuba yindlela yokuhamba. Amadoda aneenwele ezi-curly ze-4C ezinokufumana umceli mngeni kwisitayile esichaziweyo sendlela ye-2-strand, kodwa isiponji sokujija kwesiponji kungoyisa ukwenza ukubukeka okuhle.
Ukufumana i-sponge twists, i-stylist yakho iya kusebenzisa isixhobo seponji ukwenza iinwele ezijijekileyo. Oku kungasebenza kakuhle kumadoda aneenwele ezimfutshane okanye ezinde kwaye kuyancedwa kakuhle ngokusikwa okupheleyo.
Inketho yokujonga okumangalisayo kukujija okuxineneyo. Amadoda aneenwele ezinqabileyo azizukukwazi ukukhupha oku njengoko ufuna iinwele ezintle zokwenza ezi curls. Unokukufezekisa oku kujongeka ngendlela enye owenza ngayo abanye kodwa endaweni yoko, yenza ukuba icandelo ngalinye libe shushu kunesiqhelo. Olu hlobo lusebenza kakuhle kwiinwele ezimfutshane neziphakathi kwaye zinokwenziwa ngokulula ekhaya.
Iblitshi eBlonde Ijija
Yenziwe yaduma ngumdlali webhola u-Odell Beckham Jr., i-blached twists blonde yindlela yobuntu bakho kunye nefashoni yokuqaqamba. Ungaluhluza naluphi na ubude beenwele, kodwa iinwele ziyabonakala ngakumbi xa uneenwele ezimfutshane ukuya kweziphakathi. Ungazidaya iingcebiso ezinje ngentla ephezulu okanye umbala zonke iinwele zakho. Ezona mbono zixhaphakileyo zombala zi-blonde, iplatinam okanye mhlophe, kodwa unokwenza imibala epholileyo enombala obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi.
Gweba ngaphandle kwe-Undercut
Ukujija nge-undercut yimbonakalo entsha edibanisa i-90's namaxesha anamhlanje. I-undercut yindlela emfutshane enebude obufanayo ejikeleze intloko ekuvumela ukuba ugxininise iinwele ngaphezulu. Oku kujongeka kulungelelaniswe kakuhle neenwele ezinde okanye eziphakathi kwaye zinokubhalwa ngeendlela ezininzi njengokutsala iinwele kumacala ahlukeneyo okanye ukudibanisa ne-mohawk.
imibono ye tattoo kubafana
Iinwele ezijijekileyo zaMakhwenkwe
Ukugcinwa okuphantsi kunye nokwenza lula, iinwele ezijijekileyo zibukeka zintle kwaye zihamba kakuhle kumakhwenkwe amnyama. Nokuba inkwenkwana yakho ifuna ukujijwa ngaphandle, isiponji iinwele ezijijekileyo okanye ii-braids, zininzi iindlela ezintle zokujija abantwana ukuba bakhethe kuzo.
Ukuze ufumane ezona nwele zijijwayo, cela iinwele zakho ukuba zisike iinwele ezimdaka emacaleni nasemqolo. Ukuba inkwenkwana yakho inenwele ezimfutshane, jonga isiponji esijijileyo. Kwiinwele eziphakathi ukuya ezinde, fumana ujijiko lokuluka okanye uvumele ukujija kugele.
Ungazijikisa njani iinwele emadodeni
Ukujija iinwele zakho, kuyakufuneka uqiniseke ukuba iinwele zakho zicocekile kwaye zifumile. Qiniseka ukuba ukongeza imveliso yeenwele ngaphambi kokuba uqale ukuze ubambe ukufuma kwizinwele kwaye ukwazi ukubumba iikhoyili.
Icandelo leenwele zakho nangona uthanda, nokuba ngoonxantathu okanye iphethini yebhokisi yemveli. Kuya kufuneka unqume ukuba ungqindilili kangakanani, ufuna ukuba iitwist. Oku kumiselwe bubungakanani becandelo.
Icandelo elikhulu lithetha ukuba iinwele ziya kuba nkulu, encinci iya kukhokelela ekuqineni, kwinkangeleko eneenkcukacha. Xa isitayile sikhangeleka qiniseka ukuba unamacandelo, ke ezinye iikhoyili azikho mncinci kunezinye.
Yiya ngentloko yonke de ugqibe. Lindela de iinwele zomile kwaye emva koko ufefe nge-hairspray ngaphambi kokuba uyikhuphe. Ukwenza isitayile, tsala kunye nokutsala iinwele kwindlela ojonga ngayo.
iinwele ezintle zenkwenkwe
i-chiron sign calculator
ukuchetywa kweenwele zeesayizi zokulinda
eyona ngxelo yasimahla ye-synastry
iinwele ezimnyama zamadoda
amadoda achetyiweyo asezantsi
fade hairstyle for guys black
Izinwele eziQinisekisiweyo ziyafiphala